တယ်လီနောမြန်မာအနေဖြင့် မြန်မာ့ပွဲတော်ကာလအတွင်း ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ဆင်နွှဲနိုင်စေဖို့ရာ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များကို တပေါင်းတည်း မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ချစ်ရသူတွေနဲ့အတူ ဘေးကင်းပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ တယ်လီနောရဲ့ 4.5G မြန်မာ့အကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရက် “ဩဘာညံညံ” ဂိမ်းအသစ်လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဂိမ်းလေးကို ဘယ်ညာယိမ်းနွဲ့လို့ဆော့ရင်း လယ်ဗယ်ပိုမြင့်လေ 1000 GB အထိ ပိုပိုကြီးတဲ့ဆုလက်ဆောင်တွေအပြင် စိတ်ကြိုက်သုံး Facebook ဒေတာ ပက်ကေ့ချ် ၊ စိတ်ကြိုက်ဆော့ MLBB ဒေတာပက်ကေ့ချ် နဲ့ Voice ၊ SMS ပက်ကေ့ချ်စတဲ့ ဆုလက်ဆောင်များစွာကို သေချာပေါက်ကံထူးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ပိုပိုကံထူးနိုင်ဖို့ အခုပဲ MyTelenor App ကို Download သို့မဟုတ် Update လုပ်ပြီး "သြဘာညံညံ" ဂိမ်းလေးကို ချစ်ရသူတွေနဲ့အတူတူ ပျော်ရွှင်စွာ အပြိုင်ဆော့လိုက်ကြစို့နော်။ ကံထူးထားတဲ့ ဒေတာဆုလက်ဆောင်တွေကို "သြဘာမစဲ ဒေတာရှဲ" မှတစ်ဆင့် ချစ်ခင်ရသူတွေကို ဝမျှေပြီး ပျော်ရွှင်စွာဆက်လက်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ။
ဩဘာညံညံအတွက် အမေးများသော မေးခွန်းများ
တယ်လီနောရဲ့ 4.5G မြန်မာ့အကောင်းဆုံး ဒေတာကွန်ရက်က နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ SPEED+ အစီအစဉ်က အဂျွတ်တလိုင်းပဲ သွားမယ့် ဂိမ်မာတွေ နဲ့ အမိုက်စား 8K ရုပ်ထွက် ဗွီဒီယိုတွေကို ကြည့်ချင်သူတွေ လုံးဝစိတ်တိုင်းကျစေမှာပါ။ ပုံမှန်အင်တာနက် မြန်နှုန်းထက်ကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုပိုမြန်ဆန်စေမယ့် အတွေ့အကြုံက လုံး၀ ဟိုက်ရှားဘားပဲ ဒီအမိုက်စား SPEED+ ကို ပထမဦးစွာအနေနဲ့ တယ်လီနောစတား အဖွဲ့ဝင်တွေ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဝန်ဆောင်ခပေးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ သုံးနိုင်မယ့် ဒီအစီအစဉ်ကို *404# ကို ဖုန်းခေါ်ဆို၍ဖြစ်စေ၊ MyTelenor App ကနေ တဆင့် အလွယ်တကူ ရယူလိုက်ပါ။ အစီအစဉ်ကို ရယူပြီးသွားတဲ့အချိန်ကစ၍ ၂နာရီအကြာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုပိုမြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အလိုအလျောက် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် တစ်ရက်မှာ စတားအဖွဲ့ဝင်တွေက (၁)ကြိမ် ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုမြန်ဆန်တဲ့ အကောင်းဆုံး အတွေ့အကြုံတွေကို ခံစားပြီး ဆက်လက်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ။
SPEED+ အတွက် အမေးများသော မေးခွန်းများ
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အကန့်အသတ်မဲ့ဒေတာနဲ့ ဂိမ်းတွေအားရပါးရဆော့မလား၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မလား၊ သီချင်းတွေနားထောင်မလား။ မြန်မာ့အကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရက်တယ်လီနောရဲ့ အားရပါးရပက်ကေ့ခ်ျလေးက တယ်လီနောချစ်သူတို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ် .. အားရပါးရပက်ကေ့ခ်ျနဲ့ဆို တယ်လီ​နောအချင်းချင်း အကန့်အသတ်မဲ့ ဖုန်း​ခေါ်ဆိုနိုင်မယ့်အပြင် တယ်လီ​နောချစ်သူ​တွေ လုံး၀ အကြိုက်​တွေ့​စေမယ့် YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok, Joox, Mahar နဲ့ အခြား Social Media တွေပါသုံးနိုင်မယ့်အပြင် စိတ်ကြိုက်ဂိမ်း​တွေကို ​အကန့်အသတ်မရှိ သုံးလို့ရနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ၈၈၈ ကျပ်တည်းနဲ့ (၂) ရက်လုံး တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ပြီးချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ တ၀ကြီးဆက်သွယ်နိုင်မယ့်အပြင် အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စိတ်ကြိုက် သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင် နဲ့ ဗီဒီယိုတွေ နဲ့ ဂိမ်းတွေအားရပါးရ ဆက်လက်သုံးနိုင်ဖို့ အခုပဲ *808# ကိုဖုန်း​ခေါ် ဒါမဟုတ် MyTelenor App က​နေ တဆင့် အားရပါးရပက်ကေ့ခ်ျလေးကိုရယူလိုက်ရ​အောင်။
အားရပါးရ Pack အတွက် အမေးများသော မေးခွန်းများ
ညညဆို Facebook လေးပွတ်ရင်း ညဉ့်နက်သွားတတ်လား။ TikTok တစ်၀ကြီး ဆော့ရင်း ဒေတာတွေကုန်နေလား။ JOOX နဲ့ သီချင်းလေးတွေနားထောင်ရင်း ငြိမ့်နေတတ်သူလား။ ဒါမှမဟုတ် အလှအပနှင့် ဖက်ရှင်ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားသူလား။ ဒါတွေအားလုံးအတွက် တယ်လီနောရဲ့ 4.5G မြန်မာ့အကောင်းဆုံး‌‌‌ဒေတာကွန်ရက်က မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ "စုံလင်တောက်ပ 5-in-1 Pack" နဲ့ဆို အိုကေသွားပြီလေ။ ခေတ်ရေစီးကို မျက်ခြေမပြတ်ဘဲ အမြဲတက်ကြွလန်းဆန်းနေသူတွေအတွက် ရက်၃၀စာ အစုံသုံး 2GB ဒေတာ၊ ည၁၁နာရီ မှ မနက်၇နာရီ အထိ တစ်ညလုံး စိတ်ကြိုက်သုံးဖို့ Facebook+TikTok အတွက် အခမဲ့ဒေတာ၊ တစ်နေ့လုံး သီချင်းတွေ စိတ်ကြိုက်နားဆင်ဖို့ JOOX အတွက် အခမဲ့ဒေတာအပြင် ဖက်ရှင်နှင့်အလှအပရေးရာ အကြံပြုချက် SMS လေးတွေပါဝင်တဲ့ "စုံလင်တောက်ပ 5-in-1 Pack" ကို *511# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး (သို့) MyTelenor App ကနေ ရယူနိုင်ပြီနော်။ ရက် ၃၀ တိတိ စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲဖို့အတွက် ဝန်ဆောင်ခ ၁၄၉၉ ကျပ်တည်းသာ ကျသင့်မှာပါ။ ဒါကြောင့် တယ်လီနောရဲ့ 5-in-1 Pack ကို အခုပဲ ရယူပြီး စုံလင်တောက်ပစွာ ဆက်လက်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ။
စုံလင်တောက်ပ 5-in-1 Pack အတွက် အမေးများသော မေးခွန်းများ
MyTelenor app 3.19 ကို app store သို့မဟုတ် google play store မှ download ပြုလုပ် ရယူနိုင်ပြီး ဖော်ပြထားတဲ့ QR code မှလဲ ရယူနိုင်ပါတယ်။
သြဘာညံညံ ဆိုတာဘာလဲ ?
သြဘာညံညံ ဆိုတာ MyTelenor App တွင်သာရနိုင်တဲ့ Lucky Draw Campaign တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Customers များသည် ဂိမ်းဆော့ရင်း နေ့စဉ်လက်ငင်း ဆုလက်ဆောင်များကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ Telenor ၏မည်သည့် channel မှမဆို Package ဝယ်ယူ (သို့) ဖုန်းငွေဖြည့်ရပါမည်။ ပြီးရင် MyTelenor App ရှိ "သြဘာညံညံ" ကဒ်ကိုနှိပ်ပြီး lucky chance များရယူရပါမည်။ Package ဝယ်ယူပြီးရရှိမည့် lucky chance အရေအတွက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
Package ဝယ်ယူ (သို့) ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း MyTelenor သို့ဝင်ရောက်ကာ ရရှိထားသော lucky chance များကိုရယူရမည်။ အသုံးမပြုရသေးသော lucky chance များအား ကံစမ်းမဲကာလာအပြီးတွင် ပယ်ဖျက်ပါမည်။ Note : Lucky Chance များသည် Package ဝယ်ယူပြီး (သို့) ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့အချိန်များတွင် ၁၀ မိနစ်မှ မိနစ် ၃၀ အထိကြာနိုင်သည်။
ချက်ချင်းပေါက် ချက်ချင်းယူဆုအတွက် ဘယ်လိုဆော့ကစားရမလဲ ?
Lucky chance ၁ ခုကို ၁ ခါဆော့ကစားခွင့်ရှိသည်။ “Play Now” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသောအခါ Balloon သည်အလိုအလျောက်တက်သွားလိမ့်မည်။ အတားအဆီးကိုရှောင်ရှားရန်နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်သို့တက်ရန် သင်၏ဖုန်းကိုဘယ်ဘက် / ညာသို့ချိန်ညှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
* ဆုအားလုံးသည် ပြက္ခဒိန်ရက် ၃ ရက်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ကွဲပြားသောဂိမ်းအဆင့်များအတွက် ဆုတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ ?
သင်သည်ဂိမ်း၏အဆင့်မြင့်မြင့်ကိုရောက်ခဲ့လေလေ ပိုမိုမြင့်မားသောဆုရရှိရန် အခွင့်အလမ်းများများရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အဆင့် ၃ တွင်ရှိသော အတားအဆီးများကို ထိပြီးရပ်တန့်သွားပါက အဆင့် ၂ အတွက်အောင်မြင်ခဲ့သောဆုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ (အကယ်၍ သင်သည်အဆင့် ၆ တွင်ရှိသော အတားအဆီးများကို ထိပြီးရပ်တန့်သွားပါက၊ အဆင့် ၅ အတွက်အောင်မြင်ခဲ့သောဆုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ )
မူလအပိုဆုများ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ နောက်ထပ်ဆုထပ်မံရရှိပါက သက်တမ်းတိုးပါမည်လား ?
မူလသက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ နောက်ထပ်အပိုဆုများ ရရှိခဲ့ပါက ရရှိသောနေ့မှစတင်ပြီး သက်တမ်းရှိသလောက်တိုးသွားပါမည်
အခြား Facebook pack များရှိပြီးအချိန်တွင် သြဘာညံညံ မှ Facebook Night pack ထပ်မံရရှိပါကမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း ?
လက်ရှိ Facebook packs များနှင့် ဂိမ်းမှရရှိသော အပိုဆု Facebook night pack များသည်မတူညီသော ပက်ကေ့ချ်များဖြစ်ကြပြီး သက်တမ်းလည်းမတူညီကြပါ၊ ထို့အတွက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမပေါင်းစပ်ကြပါ။
Shal Shake မှMLBB Pack ရှိပြီးအချိန်တွင် သြဘာညံညံ မှ MLBB bonus pack ထပ်မံရရှိပါကမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း ?
ထိုအပိုဆုကြေး ၂ ခုသည်မတူညီသော package များဖြစ်ကြပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပေါင်းစပ်မှုမရှိပါ။
သြဘာမစဲ Data Share ဆိုတာဘာလဲ ?
သြဘာမစဲ Data Shareသည် သြဘာညံညံဂိမ်း၏လက်ကျန်ဒေတာမှ အပိုဆုဒေတာမျှဝေခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
မည်သူက သြဘာမစဲ Data Share ကို အခြားသူများသို့ မျှဝေပေးနိုင်မလဲ ?
သြဘာညံညံ ဂိမ်းမှရရှိသော 1GB နှင့်အထက် data များအပိုဆုရရှိသူ မည်သူမဆို data ဆုကိုအခြားသူများအားဝေမျှရန် ရရှိလာသော pop-up တွင် “ဒေတာဝေမျှခြင်း” ခလုတ်ပေါ်လာမည်။ (သို့မဟုတ်) ဂိမ်း page တွင်လည်း ဒေတာဝေမျှခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
သြဘာမစဲ Data Share အပိုဆုကိုဘယ်လိုဝေမျှမလဲ ?
သြဘာမစဲ Data Share မှ Data ဘယ်လောက်များများကို မျှဝေနိုင်မလဲ ?
သြဘာမစဲ Data Share အပိုဆုကြေးကို မည်သူတောင်းခံနိုင်သလဲ ?
Share Data Link နှင့် Share Data ၏ အပိုဆုသက်တမ်းမှာ ဘယ်အထိလဲ ?
အခြားသူများထံမှ အပိုဆုကိုထပ်မံ ရရှိပါက မိမိ၏ သြဘာမစဲ Data Share ၏အပိုဆုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သလား ?
သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ သြဘာမစဲ Data Share အပိုဆုကိုထပ်မံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအပိုဆု သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သြဘာညံညံ၏ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်နှစ်ရက်လဲ ?
နိုဝင်ဘာ (၂၀) ရက်နေ့မှစတင်၍ ရက်ပေါင်း (၆၀) အထိဖြစ်ပါသည်။
သြဘာညံညံကို ဘယ်နေရာတွင်ဆော့ကစားနိုင်သလဲ ?
သြဘာညံညံကို MyTelenor App Version 3.19 တွင်သာဝင်ရောက်ဆော့ကစားနိုင်ပါသည်။
အားရပါးရ ပတ်ကေ့ချ်အစီအစဉ် ဆိုတာဘာလဲ။
တစ်နေ့လုံးအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အခြားတယ်လီနောနံပါတ်များကို အကန့်အသတ်မရှိဖုန်းခေါ်ခြင်းကို (၂)ရက် စာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ပါ။
မည်သည့် ချန်နယ်လ်များတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသလဲ?
*808# ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ (သို့)
*979*3*8# ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App တွင်သက်တမ်းစစ်ဆေးပါ။
ပုံမှန်မိုဘိုင်းအမြန်နှုန်းဖြင့်ဒေတာအသုံးပြုမှုကိုနေ့စဉ် ၃ GB အထိအသုံးပြုနိုင်သည်။ နေ့စဉ် 3GB ဒေတာအသုံးပြုမှုပြီးနောက်၊ သင်၏အင်တာနက်အမြန်နှုန်းသည် 1Mbps အထိဆက်ရှိနေလိမ့်မည်။
နေ့စဉ် 3GB သုံးစွဲပြီးနောက်ဒေတာသည် အသုံးပြုမှုမြန်နှုန်းကိုဘယ်လိုကောက်ခံမလဲ။
2 ရက်သက်တမ်းအတွင်းမည်သည့်ဒေတာအသုံးပြုမှုကိုမဆို ဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိပါ။ ပုံမှန်မိုဘိုင်းအမြန်နှုန်းနှင့်အတူ 3GB ဒေတာကိုသက်တမ်းမကုန်ခင် ကာလအတွင်း 00:00 နာရီတွင်ပြန်လည်ရရှိလိမ့်မည်။
တယ်လီနော၏ Speed+ ဝန်ဆောင်မှုသည် ၅၀%ထိပိုမိုကောင်းမွန်သောဒေတာအမြန်နှုန်းဖြင့် လူကြီးမင်၏ မိုဘိုင်းဒေတာ သုံးစွဲမှုအတွေ့အကြုံကို (၂)နာရီကြာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်ခလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
တယ်လီနောစတားအဖွဲ့၀င်များသည်ဤ ၀န်ဆောင်မှုကို ဝန်ဆောင်ခ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။
“Speed+” ဝန်ဆောင်မှုသည်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဒေတာသုံးစွဲမှုသည် တခြား ပတ်ကေ့ချ် နှင့်လက်ကျန်ဒေတာများ သို့မဟုတ် paygo အသုံးပြုမှုအတွက် paygo ပေးချေမှုနှုန်းထားများမှ ကျသင့်ပါလိမ့်မည်။
မည်သည့် ချန်နယ်လ်များတွင် ရယူနိုင်ပါသလဲ?
*404# ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ (သို့)
My Telenor App တွင်ရယူပါ။
(၂)နာရီသက်တမ်းကုန်သွားလျှင်လူကြီးမင်းအား SMS ဖြင့်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်း၏မိုဘိုင်းကွန်ယက်သည် သိပ်သည်းသောဧရိယာတွင်ရှိနေပါက လူကြီးမင်း၏ဧရိယာအတွင်းရှိ ကွန်ယက်လိုင်းမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ ပုံမှန်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသော ဒေတာမြန်နှုန်း ကိုခံစားအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
စုံလင်တောက်ပ ပက်‌ကေ့ချ်တွင် ပါ၀င်သော offer ၅မျိုးမှာ
အစုံသုံးနိုင်သော 2GB ဒေတာ၊
Facebookအတွက် ညဘက် စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်သော အခမဲ့ ဒေတာ၊
TikTokအတွက်ညဘက် စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်သော အခမဲ့ ဒေတာ၊
သီချင်းပေါင်းများစွာ တနေ့လုံး စိတ်ကြိုက် နားဆင်နိုင်ဖို့ jooxအတွက် အခမဲ့ ဒေတာ များအပြင်
ဖက်ရှင် နှင့် အလှအပ ကဏ္ဍများအတွက် အခမဲ့ စာတို ပေးပို့ပေးမယ့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။
သက်တမ်းမှာ (၃၀) ရက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သက်တမ်းကုန်ပါက နောက်တကြိမ်ပြန်လည်၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
*511# ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ (သို့)My Telenor App တွင်ဝယ်ယူပါ။
စုံလင်တောက်ပပက်‌ကေ့ချ်ကို အကြိမ်ကြိမ် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသလား။
သက်တမ်းအတွင်း ၁ကြိမ်သာ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သက်တမ်းကုန်ပါက နောက်တကြိမ်ပြန်လည်၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
‌ဒေတာလက်ကျန် မည့်သို့စစ်ရမည်လဲ ။
‌ဒေတာလက်ကျန်စစ်ရန်MyTelenor app သို့မဟုတ် *124*1# သို့ခေါ်ဆိုပါ
တခြား‌ဒေတာအပိုဆု လက်ကျန်နှင့် စုံလင်တောက်ပ ပက်‌ကေ့ချ် ၂မျိုးလုံးရှိနေပါက မည်သည့် ပက်‌ကေ့ချ် ကနေ ဒေတာသုံးစွဲမှုအတွက် အရင် ဖြတ်တောက်သွားမလဲ။
သက်တမ်းအရင်ကုန်မည့် ဒေတာပက်ကေ့ချ် မှ ဒေတာသုံးစွဲမှုအတွက် အရင် ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Facebook နှင့် TikTok အတွက် ညဘက် စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်သော အခမဲ့ ဒေတာမှာ ည၁၁နာရီမှ မနက် ၇နာရီအတွင်းဖြစ်ပြီး တခြားအချိန်များတွင် သုံးစွဲမည်ဆိုပါက သက်တမ်းအရင်ကုန်မည့် အခြား ‌ဒေတာပက်ကေ့ချ် သို့မဟုတ် အစုံသုံး‌ 2GB ဒေတာ သို့မဟုတ် လက်ကျန်ငွေမှ ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ JOOXတွင် ‌ဒေတာ အသုံးပြုမှုမှာ တစ်နေ့လုံး အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
ဖက်ရှင် နှင့် အလှအပ ကဏ္ဍများအတွက် အခမဲ့ စာတို ပေးပို့ပေးမယ့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လို ရပ်ဆိုင်းရမလဲ။
*979*3*2# ကိုခေါ်ဆိုအချိန်မရွေးရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။ ရပ်ဆိုင်းပြီးနောက် ပြန်လည် ရယူလိုပါက နောက်တကြိမ် ပြန်လည် ၀ယ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။